Oromia Media Network : ODUU ADOL ,25,2018 – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOromia Media Network : ODUU ADOL ,25,2018
Gaggeesitoonni opdo alaafi keessattiis waan tokko hojjachaa jiru
Nama ajjeesani kan du’e erga du’ee booda namoota yakka hojjatan qabneerra seeratti dhiyeesina jechuun nu sosobaa jiru
Nama nu ajjeese qabani gad lakkisuu akka injifannooti nuuf gabaasu!!!!!!!!!!!!!!
Shira farreenii fi booddeesitootaa fashalsuuf tarkaanfii mul’ataan fudhatamuu qaba.
(Ibsa ABO – Adoolessa 24,2018)
Qabsoon ummatoota yeroo adda addaa jijjiirama sirnootaa dhalchee mootummoota garagaraa aangoomsuu danda’an illee fedhiin ummatootaa hin guutamne. Qabsoo ummatootaa booji’uun kanneen aangoo dhuunfatanis tahan kanneen maqaa ummatootaan aangootti ol bahan, jijjiirama bubuutuu fudhataa turaniin akeeka saaminsaa fi cunqursaaf qaban tarkaanfachiisuutti bobba’an malee, tarkaanfii mirga ummatoota kabajchiisu isaanii fudhatu hin mul’atne. Kana irraahis ummatootni qabsoo haqaa fi dimokraasii itti fufuun dirqii tahe.
Waggoota 27 dabraniif Itoophiyaa Wayyaanee keessatti ajjeechaa, hidhaa, saaminsaa fi buqqa’insa ummatoota irra gahaa ture, mootummaan kun dantaa murna bicuun alatti kan ummatootaaf hin dhaabbatne tahuu irraa, rakkoo siyaasaa mul’atutti xumura gochuuf akka ka’an taasise. Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG) Qeerroo Bilisummaa Oromoon eegalamee hirmaatnaan ummata Oromoo itti dabalamee gara FXG-tti tarkaanfatuun mooraa farreen dimokraasii raasee jijjiiramaan alatti jiraachuu kan hin dandeenye tahuu mirkanse. Jijjiirama fincila ummatootaa addatti ammoo kan Qeerroo Bilisummaa fi ummata Oromoo Itophiyaa keessatti belbeleen fedhiin ummatootaa guutamee jira jechuun danda’amuu baatullee, abdiin jijjiiramni dhufuu danda’a jedhu abdii ummatoota hundaa tahee mul’ata.
Jijjiirama hundee hawwamu argamsiisuun wareegama gaafata. Akkuma ummatooti jijjiirama hawwan wareegama qaalii baasan, tooftaa fi maqaa garagaraan duula ololaa geggeessuun jijjiirama hawwamu fashalsuuf kanneen sosso’an jiraachuun ifatti mul’ata. Hundaan olitti ammoo mariin nagaa buusuu ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabame akka hin milkoofne shirri boddeessitootaa, kanneen jijjiirama hin barbaadne waraana mootummaa, tikaa fi caasaa mootummaa keessa maadheeffataniin shiramaa jiru ol aanaa dha.
Akeekni farreen kanneenii tarkaanfii gara-jabinaa ummata Oromoo irratti fudhataa jiraniin of mul’isaa jira. ABOn Adoolessa 9, 2018 eega Dr. Abiy Ahmad waliin wal arguun araara buusuun karaa nagaatiin dhimma Oromoo irratti akkaataa waliif tumsuu fi walgargaaruu dhaan hojjachuun danda’amu irratti yaada wal dabarfatuun ni yaadatama.
Hogganni ABO marii Muummee Ministeeraa Dr. Abiy waliin godhame kana irratti hirkatuun wal hubbannootaa fi tarkaanfii jijjiiramaa siyaasaa kan Dr. Abiy fudhachaa jiru ija gatii-qabeessaan ilaaluun of keessatti marii gochuun tumsa jijjiirama sirnaa keessaa fi alaan argame kana gama fuula duraatti furga’uun jijjiirama sirnaa fiduun akka danda’amu carraan jiraachuu hubatuun, milkoomina marii kanaaf akka gargaaruuf karaa walakkaa ol deemuun tarkaanfii dhukaasa dhaabuu Adoolessa 12, 2018 labse. Gara mootummaa Itoophiyaatiinis haalli kun kan tarkaanfii fakkaataa (reciprocate) fudhatu ta’a jedhee amane. Haa ta’u malee, osoo tarkaanfii fakkaataan ni fudhatama jennee eegnuu guyyaa afur booda mootummaan Itoophiyaa fedha ABO kan milkoomina nagaa waaraaf hawwame kanarra tarkaanfatuun waraana baataaliyoona 19 Lixa Oromiyaatti bobbaasuun hanga haradhaatti ajjeechaa, hidhaa fi reebicha ummata Oromoo Dhiha Oromiyaa(Wallagga) qubatu irratti raawwataa jira.
Lolli kun lola Oromoon Oromoo irratti labsuu hin malle. Osoo nagaa buusuun waliif tumsuun dantaa ummata keenyaa tarkaanfachiisna jennee dhukaasa dhaabuun labsamee jiruu, waldhabbii barbaachiisaa hin taane kana waraana boodeessitootaan guutamee fi ummata Oromoo biratti jibbamaa tahe kana bobbaasuun jijjiirama keessaa fi alaan qabsoon argame gufachiisuuf shira xaxamee jiru jenneetti amana. Woggoota afran darban kana keessattii fi hanga hardhaatti ajjeechaan waraana wayyaanee ‘Agaaziin’ guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffame kan lubbuu ilmaan Oromoo kumaatama hedduu galaafate dha. Kanaafis, qormaatni godhamee ummataan beekame hanga ammaatti hin jiru. ABOn lubbuun Oromoo hundi wal qixa jedheeti amana. Kanaaf, Raayyaan Ittisa biyyaa fi liyyuu poolisiin beekaman hundi itti gaafatamuuf jiraatu ilaalcha jedhu qaba.
Lola ummata Oromoo Baha, Kibba-Bahaa fi Kibbaa irratti adeemsifamaa jiru akka hin dhaabbannee taasisuu keessattis harki farreen qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiraatuuf ragaan dabalataa ummatootaan beekamuu fi balaaleffatamuu dha. Boodeessitootni wandabboo humna waraanaa fi tika Wayyaanee jalatti of dhoksanii shira xaxuun Dhiha Oromiyaatti WBO fi ummata naannichaatti duulan, miiraa fi seenaa WBO abaaruu hafnaan kan ittiin qeeqanillee hin qaban. Ummatni Oromoo kanneen hardha ABO fi WBO hammeenyaan itti hamatuu barbaadanis tolcheeti beeka. Ummatni Oromoo kan isa saamaa, hidhaa, gidirsaa fi ajjeesaa bahe ni beeka. Hardha kan sammii dhaa gadi bu’an of fakkeessuu fi humnaan ummata Oromoo doorsisuun mallattoo farrummaa ta’uus ummatichi ni hubata.
Lola wal irratti labsuu irra diina lafa Oromiyaa saamuuf lola ganna torbaaf ummata Oromoo, Harargee, Baalee, Booranaa fi Gujii irratti adeemaa jiru qolachuutu irra itti gaafatamaa fi seena qabeessas jennaan, obbolleeyyan keenya qabsaawota Oromoo kan OPDO keessa jiraniin. Wal loluun diina moggaa sadiin nu mudatuuf deemu injifatuun salphaa akka hin taane kanuma waliin akeekuufii feena.
ABOn rakkoo Dhiha Oromiyaatti mul’ateef furmaatni tokkichi waraana bobbaafame kana mooraatti dachaasuu fi ajjeechaa naannoo kanatti kana duraa fi ammas gaggeeffamaa jiruuf koomishiinni(commission) walabaa tokko kan Abbootii Gadaatiin durfamu, beektoota walaba of keessaa qabu ijaaramee qormaata gaggeessuun ummataaf akka ifa baasu kan gaafataa ture, ammas irra deebi’ee komishinni kun akka utubamu gaafata.
Tarkaanfileen booddessitootaa kunneen hundi jijjiirama argamee fi hawwamu argamsiisuu fi galiin gahuu irratti danqaa kan tahan tahuun hubatamee gochaa kana dhaabsisuu irratti mootummaa fi nagaa jaalattootni tarkaanfii barbaachisu fudhatuun fardii tahuu ABOn hubachiisuu barbaada. Kana waliin ummatni Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa jijjiirama wareegama isaaniin argame tikfatuu fi galiin gahuu irratti kan irraa eegamu akka gumaachan yaadachiisa.
Injifannoo Ummata Oromoof! Adda Bilisummaa Oromoo
Adoolessa 24, 2018
Waraabessa lafti itti barii’e jechuun kana. Milkeessaa Miidhagaa, fresh OPDO, osoon saamee fi
Two died of fire in Mekelle Prison today. Prisoners who have been injured are admitted to Aider hospital